"Mid ka mid yahay tirada loneliest."—Saddex Dog Night
Yurup hindiga xagaaga ....
Waa xilli ciyaareedkan ee ku caashaqay. Waa walax uumi bixiya ee sanduuqa-office tixaha hindiga beegsadeen movies ka samaysan yihiin. Marka ey isku sixir ah ee heerkulka kulul, habeen lagu baxinayay dheer, iyo dareenka niyaddaada mellow ku dari kartaa ilaa qaar ka mid ah soo jiidasho leh "xareysatay" chemistry goobta shukaansi iyo rimay ah.
Laakiin, script ma aha isku mid ah dadkoo.
Nasiib daro waxa ay sidoo kale noqon karaan waqti adag kuwa la kulma a shukaansi "abaaraha" ama kuwa u muuqda in ay nasiib darro in jacaylka.
Dhawr bilood ee xagaaga u ekaan kartaa sida wax u dhigma of sano eey.
Laakiin halkan warka wanaagsan: haddana ma laha in.
Mid ka mid ma aha inuu ahaado "tirada loneliest" haddii aad akhriso oo digtoon taladan wakhtiyaysan.
6 Talooyin inay xagaaga kulul loo eegin xaaladdaada!
1. Halkii tirinta maalmood ah, tirin barakooyinkiinnana.
Taasi waa xaq. In kasta oo ay noqon kartaa laga cabsado in la weheliso la cutie ah, socda Solo waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah oo ay sidoo kale soo dhaweynaa.
Aan ku baaraya qaar ka mid ah. Sidee ku saabsan xaqiiqada ah in aad leedahay wadarta xorriyadda si ay u dukaameystaan ​​'til aad dhacdo? Si aad u kariyo marka niyadda aad hits? Si aad u eryan riyooyinkiinna aad faragelin la'aan?
Si aad u eegista ", hadayana jirin" waxaa laga.
2. Naftaada Taariikhda. (Hadal optional Barkimeed).
Ma u dhimanayaan in aad isku daydo in makhaayad cusub ee aaggaaga in qof walba la "guuxayaan" ku saabsan? Ma jeclaan lahayd inaad ku raaxeysan in shukulaatada decadent iyo khamri guridda? Si aad u xumaaday iyo pampered? Maxaad sug qof kale si aad u dabaal?
Naftaada ula dhaqan; ma aha in aad khiyaameeyaan!
In erayada Dr. Phil, "Mararka qaar waxaan leenahay in aan helno waxa aan mudan yihiin dadka kale."
3. Isticmaal "waqti hoos" is-hagaajinta.
Habka ugu fiican in uu soo jiito saaxiibkiisa weyn waa inuu ahaado mid. Really. Halkii dareen ka xumahay naftaada, ama sugaya by telefoonka, isku day inaad ka baxdo iyo is geliyey ciyaarta nolosha. Baro luuqada cusub. Ku biir jimicsiga. Saxiix fasalka qoob ka a. Ma aha oo kaliya qiyaastaas oo kaluu u kordhin doonaa qiimaha suuqa shukaansi ah, waxay ku kordhin doonaa isku kalsoonaanta. Bedidda Carpe!
Rux cut a timo cusub. Karsado ilaa qaar ka mid ah cuntada cusub ee jikada. Hagaajin qoyaan-. Isku day karaoke ee baar maxalliga ah.
Single-innaad waa waqti aad u weyn ee ku ogaanaysid naftaada iyo koritaanka.
5. Haleesho on reading qaar ka mid ah.
Waan jeclahay inaan akhriyo. Oo waxay u badan oo innaga mid dhib u dabmariyay ilaa buug wanaagsan, sababta keliya ee waajibaad badan noo—xidhiidh iyo shaqada. Tan iyo markii aad aadan u badan tahay in ay tahay in hadda "dabmariyay ilaa" la Wadaage, ay sahlantahay in la sameeyo waqtiga. Ma aha oo kaliya ma akhriska ballaariyo Gun aqoonta; waxaa u xoojin karto xirfadaha la sheekaysanayo. Laba horyaal Waxaan kula talin lahaa waa:
"Waxa uu Just ma in laguu" iyo "Xeerka Sida Lady a, Ka fikir sidii nin. "
6. Ha is barbar ama tartamaan.
Saaxiibkaa fiican leedahay saaxiib. Your la aroosayaa walaashay.
Your taariikheed ee bulshada waxaa ka buuxa lagu marti kuwa dadka waawayn oo u muuqdaan in ay la riyaaqayaa nolol wanaagsan.
Kiidah Hoo aad u, xaq u? Wrong. In erayada Bruno Mars, "Waxaad tahay qof cajiib ah, sida kaliya ee aad tahay. "waxaa Maskaxda ku hay.
Summer ma aha inuu ahaado bummer ah! Dooro in ay qaadato aragti wanaagsan, aragtida habboon, iyo gudaha- nabadda, iyo inta kale ee ku dhex dhici doonaan meel.
Ka hor inta aadan u ogaadaan, waxaad ku baran doontaa in ku riday "gabyi" hal.